Xulka Qaranka Congo Oo Ka Badiyay Xulka Dalka Morocco -
HomeciyaarahaXulka Qaranka Congo Oo Ka Badiyay Xulka Dalka Morocco
Xulka Qaranka Congo Oo Ka Badiyay Xulka Dalka Morocco
January 17, 2017 F.G ciyaaraha 0
Ciyaar u dhaxeysay Xulalka qaramada DRCongo iyo Morocco ayaa goor dhaweyd soo dhamaatay garoonka Stade d’Oyem. Xulka qaranka DR Congo ayaa saded dhibcood oo muhiim ah ka qaaatay dhigooda Morocco waxayna goolka.kaliya ee dhibcahan u sahlay uga mahad celinayaan laacibkooda
. Qeybtii Hore Ee Ciyaarta Ciyaarta ayaa ku bilaabatay qaab xamaasadeysan wadeyna durtaba labada xul bilaabeen inay weeraro gaadmo ah isku qaadaan walow ay dhiiranaan ka muujinayeen xaga daafaca.
Laacibka xulka Congo ee Aziz Bouhaddouz ayaa fursado door ah sameeyay wuxuunaarar badan ku sigtay inuu goolka furitaanka u keeno xulkiisa. Daqiiqadii 28aad Fursad! Laacibka xulka qaranka Congo ayaa fursad halis ah ku helay goosha Morocco balse fursadaasi ayuu khasaariyay.
Waxaa sidaasi lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta natiijada oo maraysa 0:0. Qeybtii Labaad Ee Ciyaarta Xulka qaranka Congo ayaa kubada inteeda badan maamulayay waxana halkooda kasii wadeen weerarka halista ah.
Morocco laftirkooda waxey muujinayeen dhiiranaan iyaga oo si adag u Xarriftamaym Daqiiqadii 55aad Gool Munir ayaa kubad kala dhex baxya daafaca xulka qaranka Morocco wuxuuna si farsameesan u baasay Kabtanka xulkaasi oo shabaqa si macaan u taabsiiyay.
Intaasi kadib ciyaarta ayaa kululaatay waxaana goolka looga hor maray ka dagaalamay xulka qaranka Morocco. Daqiiqadii 71aad Great Save! Laacibka xulka Morocco ee En Nesyri ayaa markan awodiisa tijaabiyay waxaana darbadiisa badbaadiyay Goolhayaha xulka qaranka Congo kaasi oo halista iska saaray.
Guntii iyo gaba gabadii ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 1:0 uu xulka qaranka DR Congo ku Badiyay dhigooda Morocco.